Startup Weekend Yangon - Travel Tech at Myanmar Tourism Federation, Yangon
Startup Weekend Yangon - Travel Tech
Time Fri Dec 15 2017 at 09:00 am to Sun Dec 17 2017 at 10:00 pm
Venue Myanmar Tourism Federation, Yangon, Myanmar
Created by Startup Weekend Yangon Follow Contact	Promote this event
Startup Weekend Yangon 2017 – Travel+TECH Edition (SWYGN)
(၅၄ နာရီ အတွင်း စွန့်ဦးလုပ်ငန်း စတင်ခြင်း)
Startup Weekend Yangon (SWYGN) 2017 – Travel+TECH Edition ပွဲဟာ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းများကို နည်းပညာအသုံးချပြီး စွန့် ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့ အတွက် စီးပွားရေးစိတ်ကူးစိတ်သန်း Idea များ စူးစမ်းစတင်လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ရှိသည့် လူငယ်၊ ဝန်ထမ်း၊ ကျောင်းသား များ သာမက လုပ်ငန်းနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ(Technical Person) နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ၅၄ နာရီအတွင်း အကောင်းဆုံး စတင် လေ့လာ ရှာဖွေ တည်ဆောက်နိုင်မည့် ပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု(Action)၊ ဆန်းသစ်တည်ထွင်မှု(Innovation) နှင့် လေ့လာသင်ယူ အတွေအကြုံရှာဖွယ်မှု(Education) တို့ကို ဦးစားပေး စီစဉ်ထားသော ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
.Early Bird Tickets Promotion!
ဒီဇိုင်နာ (Designer) Ticket - လက်မှတ် ဈေးနှုန်း ။။ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ( ပုံမှန်ဈေးနှုန်း။ ၂၅၀၀၀ ကျပ်)
Programmer/Developer Ticket - လက်မှတ် ဈေးနှုန်း ။။ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ( ပုံမှန်ဈေးနှုန်း။ ၂၅၀၀၀ ကျပ်)
စီးပွားရေး+လုပ်ငန်း+ဈေးကွက် Business Person - လက်မှတ် ဈေးနှုန်း ။။ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ( ပုံမှန်ဈေးနှုန်း။ ၂၅၀၀၀ ကျပ်)
( ပါဝင်သူ လူဦးရေ ၁၂၀ ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အချိန်မီ စာရင်းပေးသွင်းကြပါ။ )
စာရင်းပေးရန်။ ။ https://www.eventnook.com/…/startupweekendyangontravel…/home
(1). Bank Transfer: (AYA Bank Account Transfer)
Bank Name : AYA Bank ( ဧရာဝတီ ဘဏ်)
Bank Account Name: U HTUN AUNG KYAW
Account No: 0031 2010 1012 6795
Branch Address : No.151, Corner of Wardan Street and Bogyoke Road, 8th Ward, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Branch Name: Yangon (7) Wardan Branch
(2). OK$ Mobile Money App
Country : +95 (Myanmar)
Mobile No: 099 5220 2511
Name: ဦးထွန်းအောင်ကျော် (OK$ App တွင် Zawgyi-ဇော်ဂျီ် စာလုံးဖြင့်ရေးသားရန်)
( အကယ်၍ OK$ account မရှိပါက OK$ app ကို download ဆွဲပြီး အနီးဆုံး OK$ ကိုယ်စားလှယ် ကိုရှာဖွေ၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။)
(3). Visa/Master/Amex Debit or Credit Cards (PayPal Option) ဖြင့်လဲ ငွေ ပေးချေခြင်း
(4). Paypal ဖြင့်လဲ ငွေ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ငွေပေးချေပြီးနောက် လက်မှတ်ရယူရန် ပြေစာဖြတ်ပိုင်း ကို
- @SWYGN Facebook Messenger (သို့ မဟုတ်)
- @BMDWmm Facebook Messenger (သို့ မဟုတ်)
- SWYGN Facebook Page - Message (သို့ မဟုတ်)
- BMDWmm Facebook Page - Message (သို့ မဟုတ်)
- Viber: 094 303 6858
သို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားပြီး e-ticket လက်မှတ် ရယူနိုင်ပါသည်။
ပထမရက် သောကြာနေ့ (၁၅၊ ဒီဇင်ဘာလ) ညနေပိုင်းတွင် စတင်မှာကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်လုပ်ငန်းစိတ်ကူး ရှိသူများက - တက်ရောက်ပါဝင်သူများ အားလုံးအကြား မိမိလုပ်ငန်းစိတ်ကူး Buiness Idea ကို မိတ်ဆက်တင်ပြပြီး - အတူပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခြင်း အစီအစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သဘောကျစိတ်ဝင်စားသူများအကြား အသင်းဖွဲ့ကာ လုပ်ငန်းIdea ကို စနေနေ့(၁၆ ၊ ဒီဇင်ဘာလ) တောက်လျှောက် စားသုံးသူသဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံ (Business Model) ဆိုင်ရာအကြောင်းအရင်းများဖြစ်တဲ့ ဝင်ငွေအမြတ်အစွန်းဘယ်လောက် ရှိမလဲ၊ စားသုံးသူတွေဆီ ဘယ်လိုချည်းကပ်ဖြန့်ဖြူးမလဲ စသည်များ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု(သို့)ကုန်ပစ္စည်း ကို စားသုံးသူများနှင့်တိုက်ရိုက် ဆန်းစစ်စမ်းသပ်နိုင်မည့် ပုံစံငယ်နမူနာ တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကို ဝိုင်းဝန်းခွဲဝေ တာဝန်ယူ အဖြေရှာ ဆန်းစစ် စမ်းသပ်ခြင်းများကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
SWYGN Travel+TECH ရဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်ရှိန်မြင့်ချိန်ကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ (၁၇ ၊ ဒီဇင်ဘာလ) ညနေမှာ အဖွဲ့လိုက် Demo Presentation တင်ပြင်ရမည့်အစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်တင်ပြ Pitching/Presentation လုပ်ရန် စာရင်းပေးဝင်တဲ့အဖွဲ့များဟာ တောက်လျှောက် လုံးပန်း ဆန်းစစ်တည်ဆောက်ထာတဲ့ မိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့ စိတ်ကူး Solution Idea ကို လုပ်ငန်းဝင်ဆောင်မှု(သို့)ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံငယ်နမူနာ (MVP/Prototype)နှင့်တကွ စမ်းသပ်ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားသော အချက်အလက်၊ အခွင့်အလမ်း အထောက်အထားများကို စီစဉ်ထားတဲ့ အကဲဖြတ်အဖွဲ့ အပါအဝင် တက်ရောက်လာကြမည့် ဧည့်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ဧည့်သည်များ နှင့်အတူ Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition ပွဲ၌ ပါဝင်သူအားလုံးကို တင်ပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ SWYGN ကို ပါဝင်သူများဟာ မိမိတို့၏ စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းသစ် Idea ကို " ဘယ်လောက်ထိ လက်တွေ့တွေ့ ကျကျ၊အမှန်တကယ် အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်နိုင်အောင်၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်အောင် - ဆန်းစစ်တည်ဆောက်နိုင်မလဲ " ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေသစ် ညီးအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ နည်းလမ်းပြအကြံပြုပေးသူများ၊ အလားအလာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ နှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဖြတ်သန်း အဖြေရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Startup Weekend Yangon မှာ " ဘယ်လိုလုပ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲမသိလို့" - " ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ လို့ " စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်တဲ့ HumbleLAB အဖွဲ့မှ - BMD:Bootcamp Workshop - ကို SWYGN မတိုင်မီ (သောကြာနေ့ ၊ ၁၅ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ) တွင် သင်တန်းပေး လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ BMD:Bootcamp Workshop လက်တွေ့သင်တန်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် စားသုံးသူသဘောထားဆန်းစစ်ခြင်း(Customer Validation)၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံ (Business Model) ဆန်းစစ်စမ်းသပ် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် မိမိလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု(သို့)ကုန်ပစ္စည်း ကို စားသုံးသူများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆန်းစစ်နိုင်မည့် ပုံစံငယ်နမူနာ (MVP/Prototype) တည်ဆောက်ခြင်း ပညာရပ်အကြောင်းများ အပြင် မိမိလုပ်ငန်းစိတ်ကူးIdea များကို မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာ မိတ်ဆက်တင်ပြရမလဲဆို တဲ့ "Presenting and Pitch Ideas" နည်းစနစ်အကြောင်းများလည်း လက်တွေ့ဆွေးနွေး သင်ကြားရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ BMD:Bootcamp Workshop ကိုလည်း Startup Weekend Yangon နဲ့အတူ တပြိုင်တည်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH ရဲ့ထူးချက်များထဲက တစ်ခုကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်စည်းမျဉ်းပါပဲ။
နောက်ဆုံးနေ့အထိပါဝင်ချင်ပြိုင်ပြီး စာရင်းပေး တင်ပြ Presentation လုပ်မည့် အဖွဲ့တွေရဲ့ Business Idea ကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့
(၁)Customer Validation (စားသုံးသူသဘောထားဆန်းစစ်ခြင်း)
- ဘယ်လောက်ထိ စားသုံးသူများနှင် လက်တွေ့တိုက်ရိုက် ဆန်းစစ်ထားသလဲ?
-စားသုံသူတွေရဲ့ အကြံပြုဝေဖန်ချက်များကို ဘယ်လို ပြန်လည်အသုံချပြီး စိတ်ကူး Ideaကို ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားသလဲ?
- ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာရှိတဲ့ စားသုံးသူဖောက်သည်များကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သလား?
(၂)Business Model (လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံ)
- သင့်လုပ်ငန်း Idea/Solution က ဈေးကွက်တွင်းရှိပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဘာကွာလဲ၊ ဘယ်လိုကွာသလဲ?ဘာတွေမှာကွာလဲ?
- စားသုံသူတွေကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်မှာလဲ၊ သင့်ကုန်ပစ္စည်း(သို့)ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုဖြန့်ဖြူးမှာလဲ?
- ဝင်ငွေ နှင့်တကွ ဖြစ်နိုင်ခြေ အမြတ်အစွန်းတွေကို ဘယ်လောက် လက်တွေ့ ကျကျ ဆန်းစစ် အဖြေရှာထားသလား?
(၃)Execution (လက်တွေ့ စီမံဆောင်ရွက်ကောင်အထည်ဖော်ခြင်း)
- ဒီ ၅၄ နာရီအတွင်း စားသုံးသူများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆန်းစစ်စမ်းသပ်နိုင်မည့် ပုံစံငယ်နမူနာ ကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလား?
- အဖွဲ့ ဝင်တွေ တက်ညီလက်ညီ ရှိကြသလား?
Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition အဆုံးမှာ အကောင်းဆုံး အသင်း ၃ သင်းကို HumbelLAB အဖွဲ့မှ နည်းလမ်းပြအကြံပေးမှုကို ၃ လ အထိ ပံ့ပိုးပေးသွားမည့် အပြင် ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပါဝင်သူ sponsors များမှလည်း ဆုလက်ဆောင်များပေးပါမည်။
Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition မှာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသူ ဘယ်သူမဆိုပါဝင်လို့ရပါတယ်။ သင်ဟာ
- လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Professional တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
- Website ဒီဇိုင်း ဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile App UI ဒီဇိုင်း ဖြစ်ဖြစ်၊ Graphic ဒီဇိုင်း ဖြစ်ဖြစ် ရေးဆွဲနေသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
- IT Programmer ဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile Developer ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
- Marketing၊ Sales၊ Business Development အစရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကို လုပ်ကိုင်(သို့)စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ဖြစ်
- အထက်ပါ ကဏ္ဍရပ်များကို လေ့လာလိုက်စား နေသူ ကျောင်းသား လူငယ် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
သင်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ဒီ SWYGN မှာ အဖွဲ့ဝင်၊ အသင်းသား ၊ အသင်းခေါင်းဆောင် ၊ ယှဉ်ပြိုင်သူ အနေဖြင့် တထောင့်တနေရာမှ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Startup Weekend Yangon Travel+TECH ရဲ့ အနှစ်သာရအတိုင်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အားပေးရှင်သန်စေပြီး အားလုံးစုပေါင်းဝိုင်းဖွဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပါးလွတ်လတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု အဖြစ်စီစဉ်ထားပါတယ်။
Facebook Messenger/Facebook Page မှတဆင့် @SWYGN (Startup Weekend Yangon) account သို့ လည်းကောင်း
Facebook Messenger/Facebook Page မှတဆင့် @BMDWmm (BMDWorkshops) account သို့ လည်းကောင်း
Viber account : 094 303 6858 သို့ လည်းကောင်း
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤ SWYGN Facebook Page (www.fb.com/swygn) နှင့် BMDworkshops Facebook page( https://www.Fb.com/BMDWmm) တွင် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Techstars ၊ HumbleLAB Partners နှင့် ပူးပေါင်း စီစဉ်သူများ
Also check out other Business Events in Yangon, Workshops in Yangon, Arts Events in Yangon.
Map Myanmar Tourism Federation, Yangon, Myanmar
The 3rd Housing & Building 2018
Babience Special Sales at Kids Wonderland
Parasol Project 2018
Dine With Your Heart - Valentines Dinner At Savoy
Nestlé at MyJobs Job Fair
WCS Myanmar 2018 with MMOtaku